भोजराजले ४ महिना देखि हराएकी आफ्नै घर छेउकि १५ वर्षे मालतीलाई घर फर्काए, मालती कहा बसिन् यतिका दिन ? | Public 24Khabar
Home News भोजराजले ४ महिना देखि हराएकी आफ्नै घर छेउकि १५ वर्षे मालतीलाई घर...
भोजराजले ४ महिना देखि हराएकी आफ्नै घर छेउकि १५ वर्षे मालतीलाई घर फर्काए, मालती कहा बसिन् यतिका दिन ?
अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार केहि दिनभित्र उनले राजीनामा दिन लागेका हुन् ।
पार्टी फुटकै संघारमा पुगेपछी र नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डसहितका नेताहरुले उनको राजीनामा मागेपछि उनी अन्ततः राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।
उनी निकटकै उच्च नेताहरुले राजिनामा दिएर भएपनि पार्टी फुट्नबाट जोगाउन आग्रह गरेपछी उनले राजीनामा दिन लागेका हुन् । एकातर्फ आफैंले राजिनामा दिएकोजस्तो पनि हुने र अविश्वासको प्रस्तावबाटसमेत जोगिन उनले राजिनामा दिन लागेको स्रोतको दावी छ ।
यता उनले राजिनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नेकपाभित्रै रहेको बुझेका ओलीले अन्ततः पद छोड्न लागेका हुन् । राजिनामा दिने निष्कर्षमा पुगेर राजनीतिक परामर्शका लागि भन्दै उनले मन्त्रीहरुलाईसमेत बालुवाटार बोलाएका छन् ।
उनले विभिन्न मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर अन्ततस् राजिनामा दिन लागेको बताइएको छ । यद्यपी ओलीले अन्य विकल्पहरुबारे पनि मन्त्रीहरुसँग परामर्श लिन लागेको बुझिएको छ । नेकपा फुट्न लागेको तथ्य महासचिव पौडेलले घुमाउरो पाराले ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन्।
दुई अध्यक्षबीच शनिबार भेट भएको थियो।
१२ दिनपछि भएको भेट समेत सकारात्मक हुन नसकेको प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
ुदुई अध्यक्षबीच हिजो कुरा भएको थियो। तर खासै अर्थपूर्ण भएन। उहाँहरू परपर पुगिरहनुभएको छ। दुई जनाको कुरा मिलिरहेको छैन,ुती स्थायी कमिटी सदस्यले भने,ुअहिले जति पनि कारणहरू देखाइएको छ, ती सबै सतही हुन्। उहाँले मन्त्रिपरिषदकै नेतृत्व दाबी गर्नुभएको छ।ु
ुउहाँको चुरो कुरा मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व नै हो। स्थिति अलि परै पुगेको छ। उहाँले जेठ २ को सहमति भनेर त भन्नुभएको छैन। तर खासमा उहाँको चाहना त्यतैतिर हो,ुओली निकटका एक नेताले भने,ुप्रधानमन्त्रीले धेरैपटक मन्त्रीहरूको नाम माग्नुभएको छ। तर प्रचण्डले दिनुभएको छैन। नाम दिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिहाल्नुहुन्छ।ु
Previous article१९ ब’ र्षिय श्रीम ‘तीलाई भु’ डी बोकाएर श्री’ मान फ’ रार ! गोठमै ज न्मियो १२ बटा औला भएको छोरा, धुरु धुरु रोइन
Next articleसन्ताेषलाई दाङमा यति ठुलाे सफलता: ४ महिनादेखी बे पत्ता मालती यसरी घर फर्किईन, परिवारमा खुसी।